Duulimaadyada Doha, Qatar ilaa Sofia, Bulgaria waxay calaamad u tahay 10 sano oo guul ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada Doha, Qatar ilaa Sofia, Bulgaria waxay calaamad u tahay 10 sano oo guul ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Bulgaria War Deg Deg Ah • Safarka Ganacsiga • News • Wararka Qadar • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Adeegga waxaa hadda maamula Qatar Airways 'Airbus A320 casri ah oo ay ku jiraan 12 kursi oo ku jira Fasalka Ganacsiga iyo 120 kursi oo Heerka Dhaqaalaha ah.
Qatar Airways ayaa dib u bilaabi doonta duulimaadyada Doha ilaa Sofia.
Qatar Airways waxay isticmaali doontaa diyaaradda Airbus A320 ee Qatar ilaa waddada Bulgaria.
Waxaa jira “dalab xooggan” oo duulimaadyada u dhexeeya Doha iyo Sofia.
Qatar Airways waxay taariikhdeeda u calaamadisay Bulgaria, iyadoo u dabaaldegtay 10 sano oo guulo ah tan iyo duullimaadkeedii ugu horreeyay ee u dhexeeya Doha iyo Sofia Airport (SOF) 14kii Sebtember 2011.
Adeegga waxaa hadda maamula Qatar Airways 'Airbus A320 casri ah oo ay ku jiraan 12 kursi oo ah Fasalka Ganacsiga iyo 120 kursi oo ah Heerka Dhaqaalaha. Dhammaantood waxay ka faa'iideystaan ​​Oryx One oo caan ku ah nidaamka madadaalada ee duulimaadka.
Qatar Airways'Madaxa Fulinta Kooxda, Mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri: "Waxaan muddo dheer ku faannay inaan u adeegno Bulgaria oo aan ku xirno dalkan quruxda badan shabakaddeenna caalamiga ah. Waan ogaa markii ugu horreysay ee aan duulimaadka u bilownay Sofia in tani ay ahayd bilowgii xiriir xooggan oo waara. Sanado badan waxaan aragnay faa'iidooyinka adeegyada aan u leenahay Bulgaria oo aad uga sii fog himiladeena ah inaan dadka isu keenno. Duulimaadyadayada ayaa u sahashay dadka socotada ah ee ka kala yimid daafaha dunida inay la kulmaan soo dhoweyntii Bulgaria iyo taariikhdii dhaqanka iyagoo taageeraya dhoofinta alaabada Bulgaariya suuqyada dibedda.
“Waxay markhaati u tahay dalabka xoogga leh iyo sida qotada dheer ee aan dalka ugu ballan qaadnay, inaan ku talineyno duulimaadyada tooska ah ee u dhexeeya Doha iyo Sofia, laga bilaabo December ee sannadkan. ”
Maamulaha Guud ee Madaarka Sofia, Ciise Caballero ayaa yiri: “Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan u adeegno waddada Doha ilaa Sofia annaga oo la shaqeyneyna Qatar Airways. Waxay u oggolaanaysaa macaamiisha iyo macaamiisha firaaqada inay sahamiyaan caasimaddeenna quruxda badan ee Bulgaria ama magaalooyinka xeebta leh ee Varna iyo Bourgas iyadoo ay ugu wacan tahay codeshare u dhexeeya Qatar Airways iyo Bulgaria Air oo leh xiriirro duulimaad oo ka socda Sofia. Wadashaqaynteena muddada dheer ah ee aan la leenahay Qatar Airways micno weyn bay noo leedahay waxaanan rajaynaynaa inaan sii xoojinno gaar ahaan sannadka 2022-ka markaasoo Koobka Adduunka ee FIFA uu ka dhici doono Qatar. ”
Duulimaadyadu waxay sidoo kale gacan ka geysteen kor u qaadista isku -xirnaanta ganacsiga Bulgaariya tobankii sano ee la soo dhaafay oo hadda Qatar Airways Cargo waxay bixisaa in ka badan 10 tan oo xamuul ah toddobaad kasta, dariiq kasta oo duulimaadyada ka shaqeeya waddada.
Taariikhda Qatar Airways ee Bulgaria:
2011 - Diyaaraddu waxay billowday inay u duusho Sofia afar jeer toddobaadkii iyadoo sii mareysa Bucharest, Romania iyadoo adeegsanaysa A320.
2012 - Duulimaadyada oo la kordhiyay ilaa shan jeer toddobaadkii.
2014 - Bilowga adeegga maalinlaha ah ee u dhexeeya Sofia iyo Doha.
2015 - Duulimaadyada waxaa lagu calaamadeeyay joogsi Belgrade, Serbia.
2016 - Duulimaadyada tooska ah ayaa bilaabay inay kordhaan si ay u labanlaabaan maalin walba kahor inta uusan bilaaban masiibada.
2020 - Maarso, Qatar Airways waxay heshiis codeshare la saxiixatay Bulgaria Air.
2020-Oktoobar, duullimaadyadu waxay dib u bilaabayaan Covid-19 kadib, oo astaan ​​u ah adeegga Bucharest, Romania.
2021-Laga bilaabo 16ka Diseembar, duulimaadyada ayaa lagu wadaa inay mar kale istaagaan Doha ilaa Sofia, afar jeer toddobaadkii.
Bulgaria waxay xoogga saareysay ka soo kabashada mas'uuliyadda deegaanka ee masiibada, iyo Qatar Airways waxay si isku mid ah u aqoonsan tahay muhiimadda hoggaanka deegaanka si loo badbaadiyo meeraheena. Diyaaraddu waxay si joogto ah u sahaminaysaa habab waara oo duulimaadyada ah, iyo maalgelinta ay ku samayso diyaaradaha ugu shidaalka badan-oo ay ku jiraan Airbus A350 iyo Boeing 787-waxay hoosta ka xarriiqaysaa ballanqaadka Qatar Airways ee ah inay gaarto qiiqa kaarboonka eber ee 2050.
Jadwalka Duulimaadka Sofia ee hadda: 7x toddobaadkii (waqtiyada maxalliga ah)
Doha (DOH) oo u socota Sofia (SOF) QR 395 ayaa baxaysa: 08:30 ayaa imaanaysa: 15:35 (hal joogsi Bucharest hal saac)
Sofia (SOF) ilaa Doha (DOH) QR 396 waxay tagaysaa: 16:35 ayaa timid: 23:15 (hal joogsi Bucharest hal saac)
Jadwalka Duulimaadka Sofia Laga bilaabo 16 Diisambar: 4x toddobaadkii oo aan joogsi lahayn (ku xiran xaqiijin)
Doha (DOH) ilaa Sofia (SOF) QR 227 waxay tagaysaa: 07:30 ayaa imaanaysa: 11:35 aan joogsi lahayn
Sofia (SOF) ilaa Doha (DOH) QR 228 waxay tagaysaa: 12:35 waxay timaadaa: 18:15 aan joogsi lahayn